चीनलाई थाइल्याण्डले दियो दरिलो साथ, अब कोरोना भाइरसको संकट छिट्टै हट्ने ! - Sidha News
चीनलाई थाइल्याण्डले दियो दरिलो साथ, अब कोरोना भाइरसको संकट छिट्टै हट्ने !
एजेन्सी । चीनमा महामारीको रुप लिइरहेको को’रोना भा’इरसबाट चीनले छिट्टै नै मुक्ति पाउने विश्वास थाइल्याण्डले लिएको जनाएको छ । थाइल्याण्डका विदेशमन्त्री डोन प्रमुदिवानीले सो विश्वास व्यक्त गर्नुभएको चिनियाँ समाचार समिति सिन्ह्वाले जनाएको छ । प्राप्त समाचारअनुसार थाइ विदेशमन्त्री डोनले बुधबार बिहान चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको फोनवार्ताका क्रममा सो विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री यीसँगको फोनवार्ताका क्रममा बुधबार बिहान थाइ विदेशमन्त्री डोनले यस्तो सं’कटको घडीमा थाइल्याण्ड सधैँ चिनियाँ नागरिक र चीन सरकारको पक्षमा रहेको आश्वासन पनि दिएका थिए ।